January 2011 – Everybody Read TChen
Posted on January 31, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် ကဗျာမျာ3း Comments on နာနေတဲ့ ငါ့ (တို့) ကမ္ဘာ
ခုန က အမျိုး….
မိသားစုကတော့ စိတ်ထဲမှာ ဂေးလ်တီ မဖြစ်ချင်ကြဘူးလေနော် အော် ငါတို့ လုပ်ပေးနိုင်သမျှ တော့ လုပ်ပေးရမှာဘဲ ဝတ္တရား ဆိုတာကလဲ ရှိသေးတယ် နောက် ဘယ် မိန်းမယောက်ျားကများ ကိုယ့် ချစ်တဲ့ သူတယောက် ရောဂါ ခံစားနေရချိန်မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ မလုပ်ပေးချင်မလဲနော် သားသမီးတွေကလဲ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးလိုက်ချင်မှာပေါ့…..ဒါကတော့ လူလိုတွေးတာပါ လူတွေးတွေတာပေါ့
Posted on January 28, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ11 Comments on တပိုင်းတစ အတွေးကလေးများ
Posted on January 17, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အချိုချက်, အသုပ်များ9 Comments on တောင်းဆိုမှုများ နဲ့ ဝက်သားမှို
တီချမ်း ၂၀၁၁ နယူရီးယား ရီစလူးရှင်း အပ်ဒိတ် ၁၄-၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ရန်ကုန် သွားပါမယ်
၁၈-၂၁ ပုဂံ ထရက်ရှာ ဟိုတယ် မှာ နှပ်ပါမယ် ဓါတ်ပုံရိုက်မယ် ယဉ်ယဉ်ဆိုင်မှာ တိုးတိုးဆိုင်မှာ ထမင်းသွားစားမယ်
ရန်ကုန်ရောက်လျင် စားရန် အစားအသောက် စာရင်း
စကော့ဈေး တံတားအောက်မှ ကြာဇံ ဝက်သား
စကော့ဈေး အက်ဖ်အမ်အိုင်ရှေ့နား ညနေဈေးမှ စလေဇီးသီးယို
မြေနီကုန်း ပဒုံမာ ပန်းခြံနားမှ အဖိုးကြီး ဝက်သားတုတ်ထိုး
သမိုင်းလမ်းစုံ စွဲလမ်း ကြေးအိုး (ဆီချက်)၊ ဖက်ထုပ် ဆီချက်
အိမ်နား လက်ဘတ်ရည်ဆိုင်မှာ ခေါက်ဆွဲသုပ်
မြေနီကုန်း ဈေးလမ်း (အပေါ်မှ) မလိခူး ဗန်းမော် မျှစ်ချဉ် ခေါက်ဆွဲ
ပဒုံမာ လမ်း ရွှေမြို့တော် ချစ်တီးထမင်း၊ လက်ဘက်ရည်
၁၂ လမ်း ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ၊ ဝက်ခေါင်းသုပ်၊ မာလာဟင်း
၉ လမ်းထိပ် မြိတ်ကပ်ကြေးကိုက်
လမ်းမတော် ဂဏန်း ကော်ကြော်
ဝါးတန်းလမ်း ကြက်ကြော် ဆီထမင်းနယ်
တရုတ်တန်း ဝက်သားပေါင်း၊ ကောက်ညှင်းထုပ်၊ တုတ်ထိုး
၁၉ လမ်း အမဲအူပြုတ်
လမ်း ၂၀ ငါးရံ့၊ ဘဲသားဆန်ပြုတ်၊ ကြက်ခြေထောက်သုပ်၊ပဲသွေးသုပ်
၁၉လမ်း ကွေကာအုတ်၊ ကြက်ဥပေါင်း
လသာ နွားနို့ အီကြာကွေး
ကာကာ ဆိတ်သား ခါးပတ် ပလာတာ
မြေနီကုန်း ဂမုးန်ပွင့်ဘေးကလမ်း (နာမည် မမှတ်မိ) ကြာဇံသုပ်
မြေနီကုန်း ပလာဇာ ရှေ့က မုန့်ဟင်းငါး၊ အုန်းနိူ့ခေါက်ဆွဲ
၃၇ လမ်း ၂၀၃ ထမင်းဆိုင် မှ ဆိတ်သားဆီချက်၊ ဝက်ခေါင်းသုပ်၊ ပဲကြီးနပ်၊ ချဉ်ရည်ဟင်း
စကေားဈေး အနောက်ဘက် အောင်မင်္ဂလာ အမဲလုံးခေါက်ဆွဲ
အက်စ်အက်စ်စီ မျက်စောင်းထိုးလမ်းနားက (လမ်းနာမည် မမှတ်မိ ဦးချစ်မောင် လမ်းဘက်ကဝင်ရင် တော့ကြေးအိုး လမ်းနဲ့ နှစ်ဘက်ပေါက်တဲ့လမ်း) ဝက်ခေါင်းသုပ်၊ဝက်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ်
စဉ့်အိုးတမ်းလမ်းက ကြာဇံဆီချက်၊ ကန်စွန်းရွက်သုပ်၊ စတော်ဘယ်ရီဒိန်ချဉ်ဖျော်ရည်၊သီးစုံ ယူအက်စ်အေ၊ သင်္ဘောသီး ဖျော်ရည် မလိုင်များများ
နဝဒေးလမ်း က ရည်းစားဟောင်း ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်က ဟင်းထုပ်
၃၇ လမ်း အလယ်ဘလောခ် နမ့်ခမ်း ထမင်းဆိုင်က ပုံစား
ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း ကျိုင်းတုံ ၇၈၆ ထမင်းဆိုင်က ကြက်ခြောက်စပ်ကြော် နဲ့ မှိုကန်စွန်း
ဆိပ်ကမ်းသာ အောက်ဘလောခ် က မုန့်ဟင်းခါး
ပဒုံမာ ပန်းခြံထောင့် က ထမင်းပေါင်း၊ ဝက်ခေါင်းသုပ်၊ စွပ်ပြုတ်
လမ်းမတော် ထိပ် ဝက်သား သုံးထပ်သား ထမင်းကြော်
မြေနီကုန်း ကြက်လျာစွန်း ဒံပေါက်၊ ဆူးလေ နီလာ ဒံပေါက်
၉လမ်း ထိတ်နားက လက်ဘက်သုပ်
ဈေးကွေ့ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့
လှည်းတမ်း ညီအမ ကြာဇံချက်၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ ထမင်းသုပ်
ရွှေပုစွန် ဖာလူဒါ၊ စတော်ဘယ်ရီ
၁၃ လမ်း ဒိန်ချဉ်
ရွှေတောင်တန်းလမ်း ဒေါ်ချွန်း မျှစ်ချဉ် ကော်ပျံ့စိမ်း
ရွှေတောင်တန်းလမ်း အလယ်ဘလောခ် ဝက်ခြေထောက် ခေါက်ဆွဲ
လသာ ရွှေလိပ်ပြာ ဖက်ထုပ်ကြော်
ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်တိုင် နဝဒေးလမ်းထိပ် the Ritz cafe’ က အားလူးကင်၊ ကော်ဖီ၊ ပေါင်မုန့် ပုစွန် နှမ်းကပ်
စိတ်တိုင်းကျ ဆိတ်စွပ်နံပြား ကြက်သားပလာတာ
ရန်ကင်း ဆယ့်နှစ်လုံးတန်း စံပယ် ဆီချက် ဆန်ပြုတ်
အနောက်ရန်ကင်း စက်မှုတစ် ကွေ့ ကီးမားပလာတာ
လောလောဆယ် သတိရတာတွေ အရင်ရေးထားတာ နောက် သတိရရင် ထပ်အပ်ဒိတ် လုပ်ပါမယ် …. A Chen 8:27 PM 14th Jan 2011 Friday Home Bangkok
Posted on January 14, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ7 Comments on တီချမ်း ၂၀၁၁ နယူရီးယား ရီစလူးရှင်း အပ်ဒိတ်
နန်းညီက နှစ်ကူးည အကြောင်းရေးတော့ ကိုယ်လဲ နှစ်သစ် ကို ကိုယ်ဘယ်လိုဖြတ်ကူးသလဲ ရေးချင်လာမိတယ်။ ခုတလော က တကယ်ကို အတွေးတွေကော အရေးတွေပါ ခန်းနေတာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲ့ ဘလောခ်တွေ ကို လိုက်လိုက်ဘတ်ပြီး စာရေးချင်စိတ်တွေကို ကူးယူနေရတဲ့ အဖြစ်ရောက်နေတယ်။ သူတို့တွေကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များများ တကယ်ရေးဖြစ်ကြတဲ့ သူတွေဆိုတော့လေ။ အားလဲကျတယ်၊ တပြိုင်တည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ အားမရတွေဖြစ်မိတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီနည်းလေးက အလုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ ခုပဲကြည့် လိုက်ဘတ်ကြည့်လိုက်တော့ ထွက်လာတာပေါ့။ နှစ်သစ်ကူးတွေ ကိုယ့်ဘဝမှာ အခု ၂၀ တော်တော်ကျော်လောက် ဖြတ်ကျော်ပြီးခဲ့ပြီ။ ငယ်ငယ်တုံးကတော့ နှစ်ကူးည ဆိုတာ ကျောင်းပိတ်တဲ့ည အကင်တွေ စားရတဲ့ည အရက်တွေ လူကြီးတွေ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ နည်းနည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် သောက်ခွင့်ရတဲ့ ည နောက် အရွယ်လေး နည်းနည်းရလာတော့ ကန်ဘောင် မှာ ကူးတဲ့ နှစ်သစ်ည ကျိုက်ထီးရိုးမှာ ကုန်ဆုံးတဲ့ နှစ်သစ်ည နိုက်ကလပ်မှာ ကုန်ဆုံးတဲ့ နှစ်သစ်ည စတာတွေ ကြုံလာရပါတယ်။ နှစ်သစ်ည က ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲ….? ကိုယ်တခါမှ သေချာမတွေးခဲ့ဘူးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်က နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေ ဘာတွေ ဆိုတာ သိပ်အရေးမပါလို့ပဲ။ ကိုယ်က မွေးနေ့ ကိုလဲ အထွေအထူး မလုပ်တတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ မွေးနေ့ ကိုလဲ သတိတရ မှတ်မထားတတ်ဘူး။ ရည်းစားတွေလဲ မှတ်မထားတတ်ဘူး (မှတ်ရမယ် ဆိုရင်လဲ နည်းနည်းတော့ များမယ်) ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကိုယ့်မွေးဖွားသားချင်းတွေ ကော အမေ ကောတောင် ကိုယ်မမှတ်မိတတ်ဘူး။ အဲ့တော့ နှစ်သစ်ည ဆိုတာကလဲ ကိုယ့်အတွက် တော့ ဘာမှပိုမထူးခြားတဲ့ ၂၄ နာရီရှိတဲ့ ရက်တရက်ပါပဲ။ အိပ်ရာကထ ရင် မျက်နှာသစ်မယ် အစာစားမယ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ် ရေချိုးမယ် ကော်ဖီသောက်မယ် ပုံမှန်ပါပဲ။
အရွယ်ရောက်လာတော့ အဖော်ကောင်းရင် ခရီးထွက်မယ် သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး တနေရာရာ သွားကြမယ် ပျော်မယ် ပါးမယ် စားမယ်သောက်မယ် နည်းနည်းပိုလာတယ် မထွက်ရလို့လဲ ကိုယ်က ဆူပူကောက်ချိတ်နေမယ့် လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက် ဝတ္ထု ကောင်းကောင်း တအုပ်ရှိရင် ကော်ဖီကောင်းကောင်းတခွက်ရှိရင်လဲ နှစ်ကူးည က ပြည့်စုံပါတယ်။ အစကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံလေးတင်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့ ပိုစ့်လေးရေးမိတာ။ ရေးရင်နဲ့ တွေး တွေးရင်းနဲ့ ရေးပေါ့။
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ တုံးက တော့ ထောင်စုနှစ် ဘာညာ နည်းနည်းတော့ လူတွေ ရင်ခုန်လို့ ကိုယ်တောင် လိုက်ခုန်သေးတယ်။ နောက် ဝိုင်တူးကေ ကြောင့်လဲပါတာပေါ့။ နောက်တော့လဲ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါပဲ ၂၄ နာရီက ၁ နာရီ ပိုမလာပါဘူး။ လျော့လဲမသွားပါဘူး။ ဟောအခု နောက် ၂၁ ရာစု ရဲ့ ဆယ်စုနှစ် တခု ကို ဖြတ်ကျော်ရပြန်တော့မယ်။ တလောကတော့ မာရာ ကလန်ဒါ တွေ ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့တွေ ဖြစ်လာသေးတော့ နေရထိုင်ရတာတောင် လှုပ်တုတ်တုတ် (ကိုယ့်ကတော့ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်) ပြောသားပဲ ဘာမှထူးမခြားပါဘူးလို့ ကိုယ့်မိုတိုကတော့ ရှင်းတယ် ကိုယ့်ပိုက်ဆံကို မြန်မြန်သုံး သူများ ပိုက်ဆံကို ချေးပီးသုံး ဒါပဲ။
ဒီတနှစ် နှစ်ကူးညလဲ ထူးမခြားနားပဲ ဖြတ်ကူးမယ်လို့ ကြံရွယ်ခဲ့တာပါ။ မောင်သာ ကိုယ်နဲ့ တူတူရှိရင် ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး ဒမ်ဒီးဒီးဟိုင်းပဲလေနော်။ ဒါပေမယ့် မထင်မှတ်ဘဲ ဒီနှစ် နှစ်ကူးည လေးကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရော မောင်နဲ့ပါ မဲစောက်လို့ခေါ်တဲ့ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်မြို့ငယ်လေးရဲ့ အာရှလမ်းမကြီး လို့ ခေါ်တဲ့ ဟိုင်းဝေး လမ်းမကြီးဘေးမှာ ထူးထူးခြားခြား ညဘက် ပစ်ကနစ်ထွက်ရင်း ကုန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက် ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ နှစ်ကူး မီးရှုးမီးပန်းတွေနဲ့ အရက်တွေသောက် ဓါတ်ပုံတွေ ဘာတွေရိုက်ပေါ့။ တကယ်ကတော့ ပုဂံ မှာ နှစ်ကူး ကို ကုန်ချင်တဲ့ စိတ်ကလေးတခုတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲ စကားမကျန်အောင်ပြောရရင်တော့ ပုဂံမှာက နှစ်ကူး ရယ်လို့ မှမဟုတ်ပါဘူး ညနေတိုင်းလှနေတဲ့ နေရာဆိုလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပုဂံပဲရှိတာပဲဟာနော်။ နောင်များမှတော့ ကြုံအုံးမှာ ပါ ပုဂံရယ်။ အင်း အဲ့လိုတွေးလိုက်ပြန်တော့ တခါက ပုဂံက တချစ်ကိုတောင် သတိရလိုက်မိသေး။ မိညီမ ပြောသလိုပဲ ကိုယ့်စိတ်တွေ ပုဂံ ရှုခင်းနဲ့ တူတူ လွင့်လို့ ကိုယ်ကလဲ လွှင့်လို့ပေါ့….. A Chen 4:24 PM Friday 7th Jan 2011 Bangkok
Posted on January 7, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာ9 Comments on နှစ်ကူးည